software kuyedza zvakakosha - mibvunzo nemhinduro
Kuru Qa Software Kwayedza Zvakakosha - Mibvunzo neMhinduro
Software Kwayedza chiitiko chekuvandudza software. Iko kuferefeta kunoitwa kuchipesana nesoftware yekupa ruzivo nezvehunhu hwe software kune vane chekuita.
Chii chinonzi Software Kuyedza?
Vakasiyana vanhu vauya netsanangudzo dzakasiyana siyana dzeSoftware Kuedza, asi kazhinji, chinangwa ndechekuti:
Kuona kuti software yacho yasangana nezvakabvumiranwa zvinodiwa uye dhizaini
Iko kunyorera kunoshanda sekutarisirwa
Iko kunyorera hakuna zvikwata zvakakomba
Inosangana nekushandiswa kwayakaitwa sekutarisirwa kwemushandisi
Software kuyedza inowanzo shandiswa mukubatana nematemu kuongorora uye kusimbiswa .
Kusimbiswa : Tiri kuita basa chairo here? Kuongorora : Tiri kuita basa racho here?
Kuongorora ndiko kutarisa kana kuyedzwa kwezvinhu, kusanganisira software, yekuenderana uye kuenderana nechero yakabatanidzwa.
Kusimbiswa ndiyo nzira yekutarisa kuti izvo zvatsanangurwa ndizvo chaizvo zvainyatsodiwa nemushandisi.
Software kuyedza ingori imwe yemhando yekusimbisa, iyo zvakare inoshandisa matekiniki senge ongororo, kuongorora, kuongorora uye kufamba-kuburikidza.
Chii chinonzi Ongororo Yekuongorora uye chinofanira kuitwa riini?
Tsananguro yekuongorora kwekuongorora ndeye 'panguva imwe chete bvunzo dhizaini uye kuitisa' kupokana nechikumbiro. Izvi zvinoreva kuti iye muyedzo anoshandisa yake duraini ruzivo uye kuyedza ruzivo kufanotaura kupi uye pasi pemamiriro api ezvinhu iyo system inogona kuzvibata zvisingatarisirwi. Sezvo muyedzo paanotanga kuongorora iyo system, nyowani bvunzo dhizaini mazano inofungidzirwa pane iyo nhunzi uye kuurayiwa kupokana nesoftware iri pasi pekuedzwa.
Pane inoongorora yekuongorora, muyedzo anoita cheni yezviito zvinopesana nesystem, chiito chega chega chinoenderana nemhedzisiro yechiito chekare, nekudaro mhedzisiro yemhedzisiro yezviito inogona kukanganisa zvinoitwa nemuyedzo, saka nguva dzekuyedza hazvina kufanana.
Izvi zvinopesana neScripted Testing uko bvunzo dzakagadzirwa kare dzichishandisa zvinodiwa kana zvinyorwa zvekugadzira, kazhinji system isati yagadzirira uye nekuita iwo chaiwo matanho akafanana kupokana nesystem mune imwe nguva.
Kwayedza Yekuongorora inowanzoitwa sezvo chigadzirwa chiri kushanduka (chichigwinya) kana sekupedzisira cheki software isati yaburitswa. Icho chiitiko chinowirirana kune otomatiki kudzokororwa kuyedzwa.
Ndeapi maTekiniki eTechnology aripo uye chii chiri chinangwa chavo?
Matekinoroji Ekuyedza anonyanya kushandiswa nekuda kwezvinangwa zviviri: a) Kubatsira kuona hurema, b) Kuderedza huwandu hwematare ebvunzo.
Kufananidza kupatsanura kunonyanya kushandiswa kudzikisira huwandu hwezviitiko zvekuyedza nekutsanangudza akasiyana maseti e data asina kufanana uye kungoita bvunzo imwe kubva kune yega seti yedata.
Boundary Value Analysis inoshandiswa kutarisa maitiro ehurongwa pamiganhu yedata rinotenderwa.
State Shanduko Kwayedza inoshandiswa kusimbisa zvakabvumidzwa uye zvisina kubvumidzwa nyika uye shanduko kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe nedhata dzakasiyana dzekuisa
Pair-huchenjeri kana Zvese-Pairi Kuedzwa inzira ine simba kwazvo bvunzo uye inonyanya kushandiswa kudzikisira huwandu hwezviitiko zvekuyedza uchiwedzera kufukidzwa kwezvibatanidzwa zvezvinhu.
Nei Kuedzwa Kuchikosha?
Kuedzwa kunodiwa kuitira kuti uone chero zvikanganiso zviripo mune software izvo zvinogona kukuvadza. Pasina kuyedzwa kwakakodzera, isu tinogona kusunungura software inogona kukundikana uye ikonzere kukuvara kwakakomba.
Mienzaniso inogona kuve:
Software mumuchina wekutsigira hupenyu uyo ​​unogona kukonzera kukuvadza kwakanyanya kumurwere;
Software mune chirimwa chenyukireya inoongorora chiitiko chenyukireya inogona kukonzera kukuvadza nharaunda
Kubhengi kana kunyorera kwemari iyo inoverenga mareti ekuchinjana kunogona kukonzera kurasikirwa kwemari kune bhizinesi
Ndeupi musiyano uripo pakati peBug, Kukanganisa, Kukanganisa, Kukundikana, Mhosva, uye Kukanganisa?
Kukanganisa uye Kukanganisa ndizvo zvimwe chete zvinhu. Bug, Kukanganisa, uye Mhosva ndizvo zvimwe chete.
Kazhinji, munhu anogona kukanganisa (kukanganisa) iyo inogadzira chinokanganisa (bug, kukanganisa) mune software application iyo inogona kukonzera kutadza.
Kukanganisa kunoitika nekuti vanhu vanowanzoita mhosho, zvakare kunyorera software kunogona kuve kwakaomarara saka kusangana kwezvikamu zvakasiyana kunogona kukonzera kusanzwisisika maitiro.
Kuedzwa kwakawanda zvakadii?
Iko hakuna mhinduro chaiyo kumubvunzo uyu. Kuedzwa hakusi kwemhedziso uye hakuna miganho. Nekudaro, isu tinokwanisa kushandisa metriki dzenjodzi (kuyedza-kwakavakirwa panjodzi) kuti tione zviitiko zvingangokanganisa zvakanyanya kana zvikamu zve software izvo zvinonyanya kushandiswa kuitira kuti titarise nguva yedu nekuedza kwedu kuzvikamu zvakakosha kwazvo.
Kuedzwa kunofanirwa kupa ruzivo rwakakwana nezve chinzvimbo kana hutano hwechikumbiro, saka vanobatana vanogona kutora danho rakanangana nezvekuburitsa software kana kushandisa nguva yakawanda kuyedza.
Ndeipi iyo Yekutanga Bvunzo Maitiro
Kuti uwane zvakanyanya zvezviitiko zvekuyedza, nzira yakatsanangurwa inofanirwa kuteverwa. Asi chero basa rekuyedza risati ratanga, yakawanda yekuedza inofanira kushandiswa mukugadzira chirongwa chekuyedza chakanaka. Iyo yakanaka bvunzo chirongwa inoenda nenzira refu mukuona kuti zviitiko zvekuyedza zvinotevedzwa kune izvo kuyedzwa kuri kuyedza kuwana.
Iyo ingangodaro inonyanya kushanda kune yakasarudzika mamiriro ekuyedza nharaunda (senge misheni yakaoma). Masangano mazhinji ezvokutengeserana ane maitiro akaomarara ekuyedza. Nekudaro, chero kuedza kwekuyedza kunogona kushandisa matanho aya mune imwe nzira.
Iyo Yakakosha Bvunzo Maitiro ine zviitiko zvishanu:
Kutarisa Yekupedzisa Kwayedza
Maitiro ebvunzo anogara achitanga neTest Planning uye anopera nekutarisa kweKupedza Kwayedza.
Chero uye zvese zviitiko zvinogona kudzokororwa (kana kushanyirwazve) sezvo kuwanda kwekudzokororwa kungangodiwa pamberi penzira yekupedzisa yakatsanangurwa panguva yechiitiko chekuronga bvunzo.
Misimboti minomwe yeSoftware Kuedza
Pazasi pane aya manomwe manongedzo ekuyedza software:
1. Kuedzwa kunoratidza kuvapo kwetsikidzi
Kuedza kunyorera kunongoratidza chete kuti chimwe kana zvimwe zvikanganiso zviripo mukushandisa, zvisinei, kuyedza kwoga hakugone kuratidza kuti iko kushanda hakuna kukanganisa. Naizvozvo, zvakakosha kugadzira kesi dzekuyedza dzinowana hurema hwakawanda sezvinobvira.
2. Kupedza kuyedza hakugone
Kunze kwekunge chishandiso chiri pasi pebvunzo (AUT) chiine chimiro chakareruka zvine musoro uye zvakaringana kuisa, hazviite kuyedza kusanganisa kwese kunogoneka kwedatha uye zviitiko. Neichi chikonzero, njodzi uye zvakakosha zvinoshandiswa kuisa pfungwa pazvinhu zvakakosha zvekuyedza.
3. Kuedzwa kwekutanga
Tikakurumidza kutanga zviitiko zvekuyedza zvirinani kuti tishandise iyo iripo nguva. Kana mangoti zvigadzirwa zvekutanga, zvakadai sekudikanwa kana magwaro ekugadzira zvikavepo, tinogona kutanga kuyedza. Zvakajairika kuti chikamu chekuyedza chinosvinirwa kumagumo ehupenyu hwekusimudzira, kureva kuti kana kusimudzira kwapera, saka nekutanga kuyedza kare, tinogona kugadzirira kuyedza kune yega yega chikamu chehupenyu hwekusimudzira.
Imwe pfungwa yakakosha nezvekuedzwa kwekutanga ndeyekuti kana zvikanganiso zvikawanikwa pakutanga muhupenyu, zviri nyore uye zvakachipa kugadzirisa. Izvo zvakachipa zvikuru kushandura chisiri icho chinodiwa pane kuti uchinje mashandiro mune yakakura system isiri kushanda sekukumbirwa kana sekugadzirwa!
4. Kukanganisa kusanganisa
Munguva yekuyedzwa, zvinogona kucherechedzwa kuti mazhinji ekuremara akataurwa ane hukama nenhamba diki yemamojuru mukati mehurongwa. i.e. mashoma emamojuru ane akawanda ekuremara mune system. Uku ndiko kushandiswa kwePareto Pfungwa pakuyedza software: ingangoita 80% yematambudziko anowanikwa mu20% yemamojuru.
5. Chirevo chemushonga wezvipembenene
Kana iwe uchiramba uchimhanyisa iyo imwechete seti yemiedzo kasingaperi, mikana hapachina hurema hutsva huchawanikwa neaya mabvunzo eedzo. Nekuti sekuchinja kwehurongwa, mazhinji eakafanotaurwa kukanganisa anga agadziriswa uye ekare kesi bvunzo hadzishande zvekare.
Chero nguva iyo mhosva painogadziriswa kana mashandiro matsva akawedzerwa, tinofanirwa kuita regression kuyedza kuona kuti iyo nyowani yakashandurwa software haina kutyora chero chimwe chikamu che software. Nekudaro, iwo ma regression bvunzo kesi anodawo kuchinja kuti aratidze shanduko dzakaitwa musoftware kuti ishandiswe uye netarisiro yakanaka yekuremara kutsva.
6. Kuedzwa kunoenderana nemamiriro ezvinhu
Nzira dzakasiyana, matekiniki uye mhando dzekuyedza zvine chekuita nemhando uye nemhando yekushandisa. Semuenzaniso, software application mune yekurapa mudziyo inoda kuyedzwa kwakawanda kupfuura software yemitambo.
Zvinotonyanya kukosha ndezvokuti mushonga wechigadzirwa chemishonga unoda kuongororwa nenjodzi, kutevedzera vatongi vezvokurapa uye pamwe nemaitiro ekuyera ekuyedza.
Nenzira imwecheteyo, webhusaiti inozivikanwa kwazvo, inoda kuenda nekuyedza kushanda kwekuyedza pamwe nekuyedza mashandiro kuti ive nechokwadi chekuti mashandiro haana kukanganiswa nemutoro uri pamaseva.
7. Kushaya zvikanganiso kunyepa
Kungoita kuti kuyedza hakuna kuwana chero kukanganisa mune software, hazvireve kuti software yacho yakagadzirira kutumirwa. Kwakaedzwa bvunzo kwakanyatso gadzirirwa kubata zvakanyanya kukanganisa? kana kwavakagadzira kuti vaone kana software yacho ichienderana nezvinodiwa nemushandisi? Pane zvakawanda zvimwe zvinhu zvinofanirwa kutarisirwa usati waita sarudzo yekutumira software.
Chii chinonzi White Box Kuedzwa
Chena bhokisi rekuyedza rinobata nemukati mekunzwisisa uye chimiro chekodhi. White bhokisi kuyedza inonziwo segirazi, rakaumbwa, rakavhurika bhokisi kana rakajeka bhokisi kuyedzwa. Iyo bvunzo yakanyorwa zvichienderana nechena bhokisi rekuyedza zano inosanganisa kufukidzwa kwekodhi yakanyorwa, matavi, nzira, zvirevo uye pfungwa yemukati yekodhi nezvimwe.
Kuti ushandise chena bhokisi kuyedza, muyedzo anofanirwa kubata nekodhi uye nekudaro inodiwa kuti uve neruzivo rwekunyora uye kufunga kureva kuti, mukati kushanda kwekodhi. Chena bhokisi bvunzo inodawo muyedzo kuti atarise mukodhi uye aone kuti ndeipi unit / chirevo / chunk yekodhi isiri kushanda.
Iyo yekuvandudza inogadzira yuniti kuyedza kuitira kuti uone kana iyo chaiyo module kana unit yekodhi iri kushanda mushe. Yuniti Yekuyedza inouya padanho rekutanga sezvazvinoitwa uye uye kana iyo kodhi yekodhi painogadziridzwa kana chimwe chiitiko chichivakwa.
Yakasimba uye ine simba Kuongorora
Kuongorora kwakasimba kunosanganisira kuenda nekodhi kuitira kuti uwane chero chinokanganisa kodhi. Kuongorora kwesimba kunosanganisira kuita kodhi uye kuongorora zvakabuda.
Mune mhando iyi yekuyedza kodhi inoitwa nenzira yekuti chirevo chega chega chekushandisa chinoitwa kanenge kamwe. Izvo zvinobatsira mukuvimbisa kuti zvirevo zvese zvinoita pasina chero divi mhedzisiro.
Hapana software yekushandisa inogona kunyorwa mune inoenderera nzira yekukodha, pane imwe nguva isu tinofanirwa kuburitsa kodhi kuitira kuti tiite kumwe kushanda. Bazi kufukidza kuyedzwa kunobatsira mukusimbisa kwematavi ese mukodhi uye kuona kuti hapana matavi anotungamira kune zvisina kujairika maitiro echikumbiro.
Kuchengetedzwa Kwayedza kunoitwa kuitira kuti uone kuti masisitimu anogona kuzvidzivirira sei kubva pasingabvumidzwe kuwana, kubiridzira - kutsemura, chero kukuvara kwekodhi nezvimwe izvo zvinobata nekodhi yekushandisa. Rudzi urwu rweyedzo runoda hunyanzvi hwekuyedza nzira.
Rudzi rwekuyedza urimo, iko kunyorera kunoedzwa kodhi iyo yakagadziridzwa mushure mekugadzirisa imwe bhagi / chirema. Izvo zvinobatsirawo kutsvaga kuti ndeipi kodhi uye kuti ndeipi nzira yekukodha inogona kubatsira mukuvandudza mashandiro acho nemazvo.
Kubatsira kweWhite Bhokisi Kuedzwa
Sezvo ruzivo rwechimiro chekodhi yekodhi chiri chinhu chinodiwa, zvinova nyore kwazvo kuziva kuti nderupi rudzi rwekupinza / dhata rinogona kubatsira mukuyedza iko kushanda nenzira kwayo. Imwe bhenefiti yekuyera chena bhokisi kuyedza ndeyekuti inobatsira mukugadzirisa iyo kodhi Iyo inobatsira mukubvisa iyo yekuwedzera mitsara yekodhi, iyo inogona kuunza yakavanzika zvikanganiso.
Kukanganisika kweWhite Bhokisi Kuedzwa
Sezvo zivo yekodhi uye chimiro chemukati chiri chinhu chinodiwa, muongorori ane hunyanzvi anodikanwa kuti aite urwu rudzi rweyedzo, izvo zvinowedzera mutengo. Uye hazvigoneke kutarisa mukati mekese kodhi kuti uwane zvikanganiso zvakavanzika, izvo zvinogona kukonzera matambudziko, zvichikonzera kutadza kwekushandisa.
Chii chinonzi Nhema Bhokisi Kuedzwa
MuBlack Bhokisi Kuedzwa, iye muyedzo anoedza kunyorera asina ruzivo rwekunze kwekushanda kwechikumbiro kuri kuyedzwa.
Nekuti dema bhokisi rekuyedza harinei nebasa nekodhi yepasi, ipapo matekiniki anogona kutorwa kubva kumagwaro anodiwa kana dhizaini dhizaini uye nekudaro kuyedzwa kunogona kutanga nekukurumidza pazvinodiwa.
Boundary Kukosha Kuongorora Kwayedza Technique
Boundary kukosha kuongorora, BVA, inoedza maitiro echirongwa kumiganhu. Kana uchitarisa huwandu hwetsika, mushure mekusarudza seti yedata iri muzvikamu zvinoshanda, chinotevera kutarisa maitiro epurogiramu pamiganhu yezvakanaka zvikamu. Boundary value ongororo yakajairika kana uchitarisa huwandu hwenhamba.
State Shanduko Matekiniki
State change test tekinoroji inoshandiswa apo chimwe chikamu chegadziriro chinogona kutsanangurwa mune izvo zvinonzi 'zvine mwero mamiriro muchina'. Izvi zvinongoreva kuti iyo sisitimu inogona kuve mune (inogumira) nhamba yenyika dzakasiyana, uye shanduko kubva kudunhu kuenda kune imwe dzinotemerwa nemitemo ye 'muchina'.
Uyu ndiwo muenzaniso pane iyo system uye bvunzo zvakavakirwa. Chero sisitimu kwaunowana chakasiyana chakaburitswa icho chakafanana, zvinoenderana nezvakaitika kare, inogumira nyika system.
Kufanana Kuparadzanisa Kwayedza Technique
Pfungwa iri seri kwekuenzana kupatsanura bvunzo nzira ndeyekubvisa iyo seti yedata yekuisa iyo inoita kuti iyo system iite zvakafanana uye ibudise mhedzisiro yakafanana pakuyedza chirongwa.
Maitiro eenzanisano yekuparadzanisa maitiro anosanganisira kuzivisa seti yedata seyakaiswa mamiriro ayo anopa mhedzisiro yakafanana kana uchiita chirongwa uye uchivaisa seyakaenzana yedhata (nekuti ivo vanoita kuti chirongwa chiite nenzira imwechete uye vagoburitsa zvakafanana kuburitsa. ) uye kuvaparadzanisa kubva kune imwe yakaenzana seti yedata.
Kubatsira kweBlack Box Kuedzwa
Muedzo hauna rusaruro nekuti mugadziri uye iye muedzo vanozvimiririra kune mumwe nemumwe.
Iye muyedzo haadi ruzivo rweyese yakatarwa mitauro mitauro.
Muedzo unoitwa kubva pakuona kwemushandisi, kwete iye mugadziri.
Mhosva dzekuyedza dzinogona kugadzirwa nekukurumidza kana izvo zvirevo zvazadziswa.
Kukanganisika kweBlack Box Kuedzwa
Iyo bvunzo inogona kuve isina kukwana kana iyo software dhizaina yatomhanyisa kesi bvunzo.
Mhosva dzekuyedza dzakaoma kudhizaina.
Kuyedza rwese rwunogona kuiswa rwizi hakusi kwechokwadi nekuti zvinotora yakawandisa nguva; Naizvozvo, nzira zhinji dzechirongwa dzinoenda dzisingaongororwe.
yakanakisa gwara s7 kumucheto bhatiri kesi
iri giraxy s6 inoshanda isina mvura
Verizon, T-Mobile uye AT & T inoronga kupedza yavo coronavirus mabhenefiti muna Chikumi 30
Verizon inoronga kutenga gwara: ndeapi & apos; s akanyanya kuronga eVerizon kwauri?
Parler akarambidzwa neGoogle uye ari pamucheto wekubviswa naApple (Apple anoidhonza futi)
Instagram inosimbisa mitemo yekushandisa mimhanzi ine copyright mumavhidhiyo
Python Enzanisa Rondedzero Mbiri dzeDuramazwi
Apple Mepu haina & apos; haunganidze data inogona kukuziva iwe pane iyo iPhone sezvinoita Google Mepu
Tora yemahara Apple iPhone 11 kubva T-Mobile, heino maitiro